पुरानाले नयाँ नेपाली ठग्छन्- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
पुरानाले नयाँ नेपाली ठग्छन्
काठमाडौँ — पुस २५ गते प्रकाशित नम्रता शर्माको ‘फिनल्यान्डमा फसिएला है’ पढेर दु:खी भएँ । नेपालीले नेपालीलाई सहयोग नगरेर ठग्ने कुरा नौलो होइन । अमेरिकामा बसेको मेरो भतिजको पनि यस्तै अनुभव छ ।
मस्को बस्ने मेरो अर्को भतिजले त यसैकारणले कुनै नेपालीलाई सम्पर्क गर्नै छाडिदियो । विदेशमा जानेहरू सुरु–सुरुमा नेपालीसँग खुसीसाथ भेट्छन् तर पुराना नेपालीले नयाँ नेपालीलाई ठग्ने गर्छन् । अरू कोही नपाएर नेपालीलाई नै मुर्गा बनाउँछन् । विदेशमा भएका भारतीय र अन्य देशका नागरिकहरू आपसमा मिलेर बसेका हुन्छन् । तर नेपाली किन बस्दैनन् ? यो एकपल्ट गहिरिएर सोच्ने कुरा हो । नेपाली आफ्नोइमानदारी र स्वाभिमानमा अब्बल मानिन्छ ।
त्यही इमानदार, स्वाभिमान र हँसिला नेपाली के भएर त्यस्तो गर्छन् ? के हाम्रो समाजको त्यो छवि अब समाप्त हुँदै गएको हो ? हो भने यो गहिरो चिन्ताको विषय हो । हामीले आफ्नो छविजोगाउन लाग्नुपर्छ । नत्र भने विश्वमा हाम्रो
छवि धमिलो हुनेछ ।
केसीसितको सम्झौता नमान्दा
काठमाडौँ — संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बहुमतको आधारमा बुधबार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ । पारित विधेयक सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच सम्पन्न सम्झौता विपरीत छ ।
चिकित्सा शिक्षा प्रदान गरिरहेका ३ वटा सरकारी निकायभन्दा बढी ५ गुना निजी मेडिकल कलेज नेपालमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा होनहार प्रतिभावान गरिब वर्गका विद्यार्थीको चिकित्सक बन्ने चाहनालाई निजी व्यावसायिक कलेजले समेट्न सक्दैन । गुणस्तरीय सरकारी मेडिकल कलेजहरूको खाँचो छ ।
विद्यमान परिस्थितिलाई सुधार्न एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई १० वर्षसम्म सम्बन्धन दिन नपाउनेगरी सरकारसंँग भएको सम्झौता विपरीत डा. केसीलाई १६ औं पटकको अनशन बस्न बाध्य तुल्याएको छ । त्रिभुवन र काठमाडौंजस्ता पुराना र प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूले थप कलेज सञ्चालनको लागि सम्बन्धन दिन नसकिने जनाउ दिँदादिँदै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पारित गरेको विधेयकबाट विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंहरू जस्ता लाभान्वित हुनेछन् । चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील विधेयक नेपाल र नेपालीको दूरगामी भविष्यलाई ध्यानमा राखी निर्माण गर्नुपर्छ, नकि केही स्वार्थी तत्त्वको हितपोषण हुनेगरी ।